चि’तुवासँग ल’डे’र छोरीको उद्धार गर्ने यी साहसी आमा ! – " सुलभ खबर "
चि’तुवासँग ल’डे’र छोरीको उद्धार गर्ने यी साहसी आमा !
तनहुँ । तनहुँकी एक महिला चि’तु’वाको ‘आ’क्र’मण’मा परेकी आफ्नी छोरीलाई खोसेर उद्धार गर्न सफल हुनुभएको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–३, बनकेवाकी इन्दिरा न्यौपानेले सोमबार साँझ घरमै खेलिरहेकी छोरीलाई ‘आ’क्र’मण’ गरी घि;सा;रेर ५० मिटर तल पु¥याएको चि’तु’वासँग ल’डे’र छोरीलाई बचाउनुभएको हो ।घरको आँगनमा रहेको धारामा आमासँग हात समातेर पुगेकी २१ महिनाकी संस्कृति न्यौपानेलाई चि’तु’वाले ‘आ’क्र’मण’ गरी लगेको थियो । छोरीलाई चि’तु’वाले ‘ता’ने’र लगेसँगै होहल्ला गर्दै आमाले चि’तु’वासँग ‘ल’डे’र छोरी बचाउनुभएको हो । चि’तु’वाको ‘आ’क्र’मण’मा परी घाइते छोरीको पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
चि’तु’वाले बालिकाको पे’ट’मा चारवटा, दुई खुट्टामा एक÷एकवटा’ न’ङ्ग्रा’ ‘गा’डे’र घाइते बनाएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालमा उपचाररत बालिकाको स्वास्थ्य खतरामुक्त रहेको बालिकाका बाबु नारायण न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । “गाउँमा चि’तु’वाको ‘आ’त’ङ्क’ सुरु भएको धेरै भयो । हामी सबै परिवार घरमै थियौँ । आमासँगै हात समातेर गएकी छोरीलाई चि’तु’वाले ता’ने पनि श्रीमतीले साहसका साथ चि’तु’वासँग भि’डे’र छोरी बचाउन सफल भइन्”, न्यौपानेले भन्नुभयो ।
आफूसँग रहेकी छोरीलाई चि’तु’वाले तानेपछि चि’तु’वाको प’छिप’छि गएर छोरीको खु’ट्टा स’मात्न भ्याएकाले ब’चा’उन सकिएको इन्दिराले बताउनुभयो । “निधन चि’तु’वाले छोरीलाई लगेको थाहा पाएपछि ‘चि’च्या’उँ’दै चि’तु’वाको पछिपछि दौडिएँ । छोरीलाई समातेर ता’न्दै गर्दा मलाई समेत ‘आ’क्र’मण’ गर्न थालेको चि’तु’वा गाउँका मानिसले हो’ह’ल्ला गरेपछि भागेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो ।चि’तु’वाको ‘आ’क्र’मण’बाट तनहुँका विभिन्न ठाउँमा नौ जना बा(लबालिकाको भइसकेकाले गाउँमा चि’तु’वाको त्रास बढेको इन्दिराले बताउनुभयो । “गाउँमा चि’तु’वाको ड’र भइरहेको छ । घरमै खेलेकी छोरीलाई तानेपछि जसरी पनि बचाउनुपर्छ भन्ने सोचेर ‘ज्या’न’को बाजी थापेर भए पनि छोरीलाई बचाउन पुगेँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
घ’ट’नास्थलको अध्ययन गर्न पुग्नुभएका डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका प्रमुख केदार बरालले घरदेखि ५० मिटर तल बालिकालाई ल’गेको अवस्थामा आमाले चि’तु’वाबाट बालिकालाई खोस्न सफल भएको बताउनुभयो । “आमा डराएर चि’तु’वाको पि’छा नगरेको भए बालिकाको ‘ज्या’न जा’ने अवस्था थियो । आमाले आफ्नो ‘ज्या’नको जो’खि’म मो’लेरै भए पनि बालिकाको उ’द्धार गरेको पायौँ”, बरालले भन्नुभयो ।चि’तु’वाको ‘आ’क्र’मण’बाट घाइते बालिकाको पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका नगरप्रमुख किसान गुरुङले जानकारी दिनुभयो । गुरुङले चि’तु’वाको ‘आ’क्र’मण’बाट घाइते बालिका ख’त’रामुक्त रहेको र आमा सामान्य घाइते रहेको बताउनुभयो । गोरखापत्र अनलाइनमा यो खबर छ ।